Afar dalxiisayaal Ruush ah ayaa maydkooda laga helay sauna hotel Albania
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Albania » Afar dalxiisayaal Ruush ah ayaa maydkooda laga helay sauna hotel Albania
Wararka Albania • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Afar dalxiisayaal Ruush ah ayaa maydkooda laga helay sauna hotel Albania.
Wararka qaar ayaa sheegaya in dalxiisayaasha ay ku neef qabatoobeen saunada hoteelka sababo la xiriira hab hawo hawo.
Dalxiisayaal Ruush ah ayaa ku dhintay huteelka galbeedka Albania.
Wakiilada Safaaradda Ruushka ayaa baaraya geerida afar dalxiisayaal Ruush ah.
Dalxiisayaal Ruush ah ayaa maydkooda laga helay huteel ku yaal tuulada Kerret ee galbeedka degmada Kavaja ee Albaaniya.
Wakiilka ergada diblomaasiyadeed ee Ruushka ee Tirana, Albania ayaa sheegay in afar dalxiisayaal Ruush ah laga helay meydka hoteel ku yaal tuulada Kerret ee degmada Kavaja ee galbeedka Albania.
Xubnaha shaqaalaha qunsuliyadda safaaradda Ruushka ee Albania ayaa baaraya faahfaahinta dhimashada dalxiisayaasha Ruushka.
"[Waxay] baarayaan duruufaha," ayuu yiri afhayeenka safaaradda.
Sida lagu daabacay wargeyska Albania Daily News, afar dalxiisayaal Ruush ah ayaa maydkooda laga helay goor dambe oo Jimcihii huteelka sauna ee tuulada Kerret ee degmada Kavaja ee Albaniagalbeed.
Dhammaantood way neef qabatoobeen, ayaa daabacaddu sheegtay iyada oo la tixraacayo ilaha booliiska.
Gaar ahaan, booliisku waxay baarayaan in nidaamka hawo -qaadka ee saunahu si fiican u shaqeeyay.
Dadka dhintay oo kala ahaa laba rag ah iyo laba dumar ah ayaa da’doodu u dhaxaysay 31 ilaa 60 jir.